गाँजा र भाँग खेतीबाट यसरी गर्न सकिन्छ आम्दानी « Sansar News
२४ असार २०७७, बुधबार १३:३६
गाँजा खेतीगर्दा एक रोपनी जग्गामा ५८३ बोट गाँजा उमार्न सकिन्छ । त्यस मध्ये ८३ बोट भाले हटाउँदा ५०० बोट आयमुलक हुनेछ र प्रतिबोट १ किलो गाँजा तयार गर्न सकिन्छ । एक रोपनीमा ८ किलो चरेस तयार हुन्छ । चरेसलाई प्रतिकिलो रु. २५००० ले बिक्री गर्दा रु. २००००० र गाँजाका पात प्रतिकिलो रु १००० ले बिक्री गर्दा रु. ५००००० गरी कुल रु. ७००००० आय हुनेछ भने श्रम मल, जल, बीउ आदि खर्चको रु. १०,०००० घटाउँदा प्रति रोपनी खुद् आय रु. ६००००० प्राप्त हुन्छ ।
एक रोपनीमा १५० बोट भाँग हुन्छन् । ३ दाना रोपेको ठाउमा सबै उम्रिएर तिन बोट भएको भएपनि सरदर एक बोट नै मानिएको छ । प्रतिबोट सरदर ८०० ग्रामफल प्राप्त हुँदा १२० किलो भाँगो तयार हुन्छ प्रतिकिलो भाँगो रु ८० मा बिक्री गर्दा प्रति रोपनी ९६०० आय हुन्छ भने यसको फसल तयार गर्दा बिउ, मलः श्रम सबै खर्च २६०० हुन्छ । यसको फलबाट मात्र खुद् आय ७००० हुन्छ ।
गाँजा नेपालको रैथाने वनस्पति हो । यसका ४ प्रजाति हुन्छन् । भाँग अर्थात् भाँङ्गो फुलङ्गो भाले, भाँग पोथी, गाँजा फुलङ्गो भाले र गाँजा पोथी गरी ४ प्रकार हुन्छन् । देख्दा सबै बोटका पात उस्तै उस्तै भएपनि सानो–ठूलो फल्ने नफल्ने गरी प्रजाति छुट्याउन सकिन्छ । यस वनस्पतिको विभिन्न भाषामा नामहरू संस्कृत भङ्गा, गञ्जा, मालुलानी, विजया, जया नेपालीमा भा“गो र गाँजा रस गुण वीर्य भङ्गाकफहरी तिक्ता ग्राहिणी पाचनी लघु : तीत्तक्षणोष्ण पित्तलमोह मदवाग्वन्हि वर्धिनी अर्थात् तिक्त रसयुत्त कफृरोग नाशक, ग्राही, पाचक लघु तीक्षण पित्तकारक, मोह, मद, वाणीर जठराग्नीवर्धक उष्ण वीर्य भएको हुन्छ ।
तराई क्षेत्रमा मंसिर पुस तिर खेत ख¥यानहरूमा स्वत स्फुर्त रुपमा आफै उम्रिन्छ, उफ्रिएको गा“जामा हजारौ पोथी बिच एक दुई बोट भाले भेटिन्छ । यो उष्ण क्षेत्रमा मात्र पाइने प्रजाति हो ।
यो वनस्पति समुद्र सतहदेखि १४०० मिटर देखि २५०० मिटर सम्मको क्षेत्रमा प्रसस्त हुन्छ । यसको बोट २ फुट देखि ४ फुट सम्म अग्लो हुन्छ । यसको भाले फुलङ्गो हुने हुनाले व्यवसायिक रुपमा अनुत्पादक मानिन्छ भने पोथीबाट चरेस निकाल्ने र गा“जा सेवन वा औषधि निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिन्छ ।
यो वनस्पति पनि समुद्र सतह देखि १४०० देखि २५०० मिटर सम्म खेतीगर्न सकिन्छ । यो वनस्पतिको ५ फुट देखि १२ फुट सम्म अग्लो हुन्छ । यसको पनि भाले बोट फुलेको हुन्छ, त्यो खेतीको लागि अनुत्पादक हुन्छ । पोथीबाट प्रतिबोट आधा किलो देखि एक किलो सम्म भाँग भन्ने फल उत्पादन हुन्छ ।
खेतीप्रक्रिया भाँग र गाँजा
हावापानी : १४०० मिटर देखि २५०० मिटर सम्मका
वारीहरूमा हुने वर्षा वा हावा
माटो : सामान्य कंक्रीट युक्त कालो माटो
समय : बैशाख, जेष्ठ, मैनामा बिउ रोप्ने असोज कार्तिक
मंसिर मैना सम्ममा फसल तयार गर्ने । एक बोट देखि अर्को
बोटको दुरी । गाँजा १/१ मिटरको दुरीमा ३/३ दाना राप्ने ।
भाँङ : एक बोट देखि अर्को बोटको दुरी २/२ मिटर हुने
गरी ३/३ दाना रोप्ने वा मकैबारीको छेउको डिलमा रोप्ने ।
एक रोपनीमा १५० बोट भाँग हुन्छन् । ३ दाना रोपेको ठाउमा सबै उम्रिएर तिन बोट भएको भएपनि सरदर एक बोट नै मानिएको छ । प्रतिबोट सरदर ८०० ग्रामफल प्राप्त हुँदा १२० किलो भाँगो तयार हुन्छ प्रतिकिलो भाँगो रु ८० मा बिक्री गर्दा प्रति रोपनी ९६०० आय हुन्छ भने यसको फसल तयार गर्दा बिउ, मलः श्रम सबै खर्च २६०० हुन्छ । यसको फलबाट मात्र खुद् आय ७००० हुन्छ । यसको बोटबाट प्रतिबोट २०० ग्राम पटुवा प्राप्त हुन्छ सबै बोटबाट ३० किलो पटुवा प्रतिकिलो रु ५० ले बिक्री गर्दा १५०० खुद आय हुन्छ । पात प्रतिबोट २ किलो तयार हुन्छ । औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीले घनसत्व तयार गर्न खरिद गरेको अवस्थामा ३०० किलो पातको प्रतिकिलो रु ९० मा बिक्री गर्दा रु २७,००० प्रति रोपनी आय प्राप्त गर्न सकिन्छ । पात बिक्रीबाट लाभ लिन देशमा घनसत्व यन्त्र स्थापना भएको अवस्थामा यसका पात बिक्री हुनेछन् । उक्त यन्त्र नभएसम्म भाँगोको पातको आय हुने छैन । बोक्रा र दानाबाट मात्र हुनेछ । जसको खुद् आय प्रति रोपनी रु. १११०० हुनेछ ।
गाँजा खेतीबाट हुने आय
आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, होमियो पैथिक औषधि उद्योग एलोपैथीक एवम् खाद्यौषधि र सौन्दर्य प्रसोधनका उद्योगको समेत कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने गा“जा र भाँगको खेती गर्न निश्चित क्षेत्रका किसानलाई प्रमाणित गरी सैनिकको निगरानीमा खेती गराउने प्रक्रियाको यथाशीघ्र कानुनी व्यवस्था मिलाई थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक फाइदाको बारेमा त माथी नै जानकारी गरायो, सौन्दर्य प्रसाधन खाद्यौषधि बाहेक रोगौषधिका बारेमा मात्र भन्दा पनि गाँजा र भाँगले दिने फाइदा निम्नानुसार छ :
गाँजा भन्दा भाँग अधिकग्राही हुने हुनाले रगतमासी विग्रेर संग्रहिणी भएका बिरामीलाई निको पार्छ अन्य गुण दुबै द्रव्यका समान हुन्छन् ।
दुखाई कम गर्न, अरुची हटाई भोक बढाउने औषधि निर्माणमा दुवै वनस्पतिको समान स्थान रहन्छ ।
दुवै वनस्पति टाउको दुखाई र सबै प्रकारका वाथ रोग नाश गर्न सक्षम छन् ।
कासो र श्वास प्रश्वासका रोगीलाई पनि यी वनस्पतिको औषधि सेवन गराइन्छ ।
धातुक्षय यौनशक्ति कम भएका नर तथा नारीलाई पूर्ण यौनानन्दको प्राप्तिका लागि भाँगका दानाको तेलबाट तयार गरिने औषधि अत्यन्त गुणकारी हुन्छ ।
यो वनस्पति लागू पदार्थ अन्तरगत पर्ने हुनाले मान्यता प्राप्त कम्पनीबाट तयार भएका औषधि मात्र सेवन गर्नुपर्छ । गुण राम्रो रहेछ, मलाई त्यस्तै प्रकृतिको रोग छ, थोरै खाई हेरौँ त, भनी आफू खुसी सेवन गर्नु हुँदैन ।
(डा गौतम त्रयम्बकम् जडिबुटी सहकारी संस्था लिमिटेड, रुपन्देहीका अध्यक्ष हुन् । )